“Waxaan ka codsaday hooyadey inay nafta i dhaafiso sababa la xiriira…” – Baggio – Gool FM
“Waxaan ka codsaday hooyadey inay nafta i dhaafiso sababa la xiriira…” – Baggio
Dajiye October 14, 2019
(Italy) 14 Okt 2019. Halyeeyga kubadda cagta dalka Talyaaniga ee Roberto Baggio ayaa sheegay in hooyadiis uu ka codsaday inay nafta dhaafiso, markii ugu horreysay ee qaliin lagu sameeyay sanadihii ugu horeeyay ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta.
Roberto Baggio ayaa in muddo ah wuxuu garoomada kaga maqnaa dhaawac soo gaaray, waxayn maqnaanshiyihiisa ay gaartay ilaa iyo 500 maalmood inta u dhaxaysay 1985 iyo 1986.
Halyeeyga reer Talyaani ayaa wuxuu xaqiiqjiyay inuu ku soo noolaa xilli aad u adag, kaddib markii ugu horreysay uu maray qaliin wuxuuna wareysi uu bixiyay ku sheegay:
“Dhaawacyadu waxay igu ahaayeen riyo xun, maalin kaddib qaliinkii la iiga sameeyay Jilibka, waxaan ka codsaday hooyadey inay i disho oo ay nafta i dhaafiso”.
“Waxaan dareemay inaan ahay dambiile markii aan ku dhowaaday inaan ka tago Fiorentina, si aan u aado kooxda Juventus, xitaa haddii aan ahaa qofka ugu dambeeya ee la eedeeyo”.
Si kastaba ha noqotee, Roberto Baggio ayaa ku qaatay xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta oo dhan gudaha dalka Talyaaniga, wuxuuna ku guuleystay dhowr koob muhiim ah oo ay ku jiraan Champions League, Serie A iyo Copa Italia.
Roberto Baggio ayaa xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta wuxuu soo xirtay maaliyadaha kooxaha Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna iyo Inter Milan ka hor inta uusan kubadda cagta kaga fariisanin naadiga Brescia sannadkii 2014.
Baggio ayaa wuxuu ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ee xiddiga ugu fiicanaa caalamka sanadkii 1993-kii, wuxuuna ku garaacay xiddigaha kala ah Dennis Bergkamp iyo Eric Cantona.
“Tababbarka kooxda Real Madrid waa shaqo aan aqoon wax nasiino ah” – Zidane